Kaalmo la siinayo haweenka uurka leh ee aan awoodin inay shaqeeyaan sababo la xiriira halista Corona Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaKaalmo la siinayo haweenka uurka leh ee aan awoodin inay shaqeeyaan sababo la xiriira halista Corona
Dawladdu ayaa go’aansatay inay siiso haweenka uurka leh kaalmo haddii aysan shaqeyn karin cabsi ay ka qabaan infekshan ku dhaca Coronavirus, aysan sidoo kale awoodin inay ka shaqeeyaan guryahooda. Sida uu soo xigtay TT.
Maamulka daryeelka bulshada ayaa xaqiijiyey in haweenka qaba corona muddadii u dambeysay ee uurka ay ku jiraan halista sii kordheysa ee foosha degdegga ah, iyadoo la tixgelinayo haweenka uurka leh toddobaadyada 22-36 ee kooxaha halista ugu jira.
Wasiirka amniga bulshada Ardalan Shekarabi ayaa maanta u sheegay SVT, “Tan iyo markii Waaxda Daryeelka Bulshada ay shaacisay inay jirto qatar gaar ah oo ku saabsan haweenka uurka leh, waxaan tixgelinay kaalmo ay heli karaan.”
Haweeneyda uurka leh ee aan awoodin inay shaqeyso iyadoo ka baqeysa Corona, isla markaana aan ka shaqeyn karin guriga, waxay kaalmo ka dalban kartaa Sanduuqa Caymiska Bulshada laga bilaabo maanta, sida uu sheegayo Shakarabi.
Magdhowgu wuxuu gaari karaa 804 karoon maalintii ugu badnaan waa 180 maalmood.
Shekarabi wuxuu sheegay in loo shaqeeyaha ay tahay inuu isku dayo inuu shaqada ka hubiyo shaqaalaha, haddii aysan taasi jirinna, haweeneyda uurka leh waxay heli kartaa kaalmada.